-Dhacdo China True Wireless Bluetooth IPX5 Dhididka Caddaynta Dhididka iyo Warshada |Roman
Sanduuqa dallacaadda: 300 mAh
Battery-ga dhegaha: 50 mAh
Taabasho Wacan Oo Qarsoon.
La yaabka leh ee 4g ultra-mini headset waxa uu ku siinayaa xidhasho aad u raaxo badan, oo waxa lagu qariyaa dhegtaada si ay u bixiso xoriyada ugu badan.
Qalabka dhegaha-dhegaha ee taabasho Wireless-ka ah ayaa bixiya xorriyadda dhaqdhaqaaqa oo leh kala duwanaansho fiilo-dheer oo dheeraad ah iyo awoodaha lacag-qaadista ee socodka.Waad ku mahadsan tahay naqshadooda, kaliya kuma dhaqaaqi doontid xorriyadda, laakiin sidoo kale qaab ahaan.
Dheecaanka dhegaha ee dhererkiisu yahay 10 mitir, taleefoonnada dhegaha-dhegaha ayaa bixiya taageero xitaa marka aad ka maqan tahay qalabkaaga.Dareen xor u ah inaad ku wareegtid qolka inta uu taleefankaagu dalacayo adoon joojin muusiggaaga.
Awoodda biyuhu ee IPX5 waxay kuu oggolaaneysaa inaad ku raaxaysato raaxada ugu badan xitaa dhididka ama roobka fudud.
S) Sameecadu kuma xidhi karo talefanka gacanta.
A) Hubi in madaxa dhegahaagu uu ku jiro qaab lammaane / Hubi haddii shaqada raadinta Bluetooth ee taleefankaaga gacanta uu shiday / Hubi menu-ka aaladda gacanta ee Bluetooth oo tirtir/iska ilow madaxa dhegaha oo dib u xidh madaxa dhegaha mar labaad adigoo raacaya buug-gacmeedka isticmaale.
S) Sameecada ma dami karo
A) Fadlan hubi heerka batteriga madaxa dhegaha oo dib u buuxi haddii loo baahdo.
Q) Uma isticmaali karo sameecado si aad u xakameyso mugga ama u doorato raadadka APP ee taleefankaaga gacanta.
A) Hababka Software-ka ee APP-da waxa laga yaabaa inay kala duwanaadaan oo hawlaha qaar ee APP-da laga yaabo in aanay xakamaynin madaxa dhegaha.
Q) Ma dalaci karo sameecadda
A) Hubi in labada daraf ee fiilada USB ay si ammaan ah ugu xiran yihiin.Haddi aad isticmaashid goob koronto, hubi in sahayda korontadu ay si badbaado leh ugu xidhantahay oo ay shaqadu shaqaynayso.Haddii aad isticmaasho kombuyuutar, hubi inuu ku xiran yahay oo ay ku xiran tahay dekedda USB.Ka saar oo dib ugu xidh fiilada ku dallaca USB.
Hore: TWS Bluetooth Earbud oo leh IPX5 biyuhu-ilaaliye
Xiga: Maqaarka Ciyaaraha Dhabta ah ee Dhagaha Wireless
TWS Dhagaha-dhegaha Bluetooth-ka ee Muujinta Awoodda baytariga Wir...
Taleefoonnada dhegaha ee Bluetooth-ka qoorta, Wireless-ka socda...